ओलीका ‘दाहिना ईश्वर’ झन् शक्तिशाली बनेर मन्त्रिपरिषद
धैर्यकान्त दत्त काठमाडौं - बिहीबार, असोज २९, २०७७
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बुधबार मध्यरातमा ‘विकसित परिस्थिति र घटना–प्रसंगका सम्बन्धमा मानिसहरूको बुझाइ, विश्लेषण र अभिव्यक्ति÷टिप्पणी हेर्दै.....बुझ्ने कोसिस गर्दै....!!!’
‘रक्षामन्त्री’ बाट ‘उपप्रधान’ मात्रै भएको करिब ६ घन्टापछि उनको यो ‘ट्विट’ आएको थियो।
बुधबारको मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा ईश्वरर पोखरेल पनि, प्रधानमन्त्रीको नजरमा ‘हेरिए’ अनि ‘फेरिए’।
प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले उनलाई रक्षा मन्त्रालयको ‘जिम्मेवारी’ बाट मुक्त गरिदिए, अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ल्याएर राखिदिए।
यद्यपि, उनको यो ‘हेरफेर’ को कैफियत ‘बिनाविभागीय’ छैन, बरु स्पष्टसँग ‘उपप्रधान’ र ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय’ राखिएको छ।
उनको ‘अनौठो’ जिम्मेवारीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरै टिप्पणी आएका छन्। करिब ६ घण्टासम्म सामाजिक सञ्जालमा ईश्वर पोखरेल ‘ट्रोल’ नै बने।
र, ढल्किँदो मध्यरातमा उनले लेखे, ‘अभिव्यक्ति टिप्पणी, हेर्दै... बुझ्ने कोसिस गर्दै...।’
प्रधानमन्त्रीलाई रक्षा मन्त्रालय, ईश्वरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय!
एउटा गज्जबको रहस्य यहीँनेर छ।
रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन्। चाहेको भए, उनले कसैलाई त्यो दिन पनि सक्थे।
तर, ईश्वर पोखरेललाई झिकेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राखे।
झट्ट हेर्दा, अब ईश्वर पोखरेलसँग पदमात्रै छ, जिम्मेवारी छैन। सामाजिक सञ्जालमा उडाउनेहरूको भाषामा भन्दा ‘पेन्डुलम।’
तर, ओली यति चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् कि, रहस्यको यो पर्दा उनले कुनै ‘ऐनवक्त’ मा फ्याट्टै उठाइदिन्छन्।
उनको यो राजनीतिक ‘चतुर्‌याइँ’ कसले पो बुझ्नु! पार्टी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले पनि ओलीलाई चिन्नुपर्ने रूपमा सायदै चिनेका छन्।
नत्र दिनभरि प्रधानमन्त्रीसँगै बसेका प्रचण्डले साँझपख मन्त्रिमण्डल हेरफेरप्रति ‘आपत्ति’ जनाइराख्नुपर्ने थिएन।
बुधबार दिउँसो करिब तीन घन्टाजति ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो। तर, त्यहाँ मन्त्रिपरिषदबारे कुनै कुरै भएन।
‘त्यो बेला कर्णालीकै विषयमा मात्रै कुरा भएको हो। कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौं बोलाइएको सन्दर्भमा, त्यहाँको विकसित राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा मात्रै कुराकानी भएको हो,’ प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले भने, ‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे केही कुरै भएन।’
ओलीसँग छुट्टिएको करिब दुई घन्टापछि प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको थाहा पाए र, ‘आपत्ति’ जनाए।
जबकि, भदौ २६ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले नै ओलीलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको म्यान्डेट दिएको थियो।
तर, यसका लागि एउटा सर्त थियो– ‘पार्टीसँग समन्वय गर्नुपर्ने।’
र, उनै ओली जसले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सँगै राखेर पनि मन्त्रीमण्डलबारे सुइँकै दिएनन्।
‘ईश्वरीय–शक्ति’ के होला?
मन्त्रीमण्डलभन्दा पनि चर्चाको विषय बनेका छन्, ईश्वर पोखरेल।
एउटा मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधामन्त्री कार्यालयमा थन्क्याउनुको रहस्य के हो त?
‘रक्षामन्त्री हुँदा एउटामात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहन्थ्यो,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पछिल्लो निर्णयबाट हामीले उहाँलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरेका छौं। एक हिसाबले अब उहाँले मन्त्रिपरिषद संयोजन गर्नुका साथै सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ।’
उनका अनुसार ईश्वर अब ओलीकै ‘दाहिना’ भएका हुन्। हटाइएका, खोसिएका वा ‘जगेडाइएका’ होइनन्।
‘प्रायः बिरामी भइरहने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सरकार सञ्चालनमा सहयोगी हातको जरुरी थियो। र, त्यो जिम्मेवारी उहाँले पोखरेल कामरेडलाई दिनुभएको छ,’ नेकपाका ती नेता भन्छन्।
‘ईश्वर दाहिना’ बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले पटकपटक गरेका छन्। अहिले अलि नयाँ प्रयोग गर्नमात्रै खोजेका हुन्।
नत्र, ईश्वरलाई ओलीले सधैं आफ्नो ‘पावर–प्रस्तोता’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
देशमा कोरोना संक्रमणले जरा गाड्दै गर्दा प्रधानमन्त्री मिर्गाैला फेर्ने तयारीमा थिए।
ओलीले ईश्वर पोखरेललाई ‘कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति’ को संयोजक बनाएर आफू अस्पताल छिरे।
अर्थ स्पष्ट थियो, ‘ओलीको अभाव नखट्कियोस्।’ किनकि, संक्रमणको पारो उकालो लाग्दै गर्दा खोजिने र आलोच्य हुने नै सरकार हो।
त्यो बेला मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने निर्णयजति उनकै समितिले गथ्र्याे, नाममात्रैको अनुमोदन मन्त्रिपरिषदबाट हुन थाल्यो।
भलै, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उनी विवादित भए। तर, सरकारले त्यो सामान खरिदमा घोटाला गर्ने ‘ओम्नी’ लाई कारबाही गरेजस्तो गरेर त्यो मुद्दै शिथिल पारिदियो।
आरोप र इसारा त थिए नै तर, पनि ईश्वरमाथि त्यो ‘ओम्नी’ को दाग बस्नै पाएन।
यो बीचमा पोखरेल नेतृत्वको त्यो समितिको ‘उल्लेख्य’ काम त केही पनि देखिएन। तर, पनि समिति कायमै थियो। बरु पछि त्यसको नाम फेरियो र, ‘सिसिएमसी’ बन्यो।
मन्त्रिपरिषदमा जानुपर्ने प्रस्ताव अनि सिफारिसहरू एकचरण ईश्वर नेतृत्वको त्यही समितिले टुङ्गो लगाइदिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन्छ।
योबाहेक समितिको अर्काे कुनै काम छैन।
बुधबार नै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले ईश्वरलाई बधाई दिँदै फेसबुकमा लेखे– ‘उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको समग्र कामको संयोजन गर्ने नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएकोमा कमरेड ईश्वर पोखरेललाई हार्दिक बधाई। तपाईंको भूमिकाबाट सरकारको समग्र काम थप प्रभावकारी हुने विश्वाससहित शुभकामना।’
स्थायी कमिटी सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री पोख्रेलको एउटै शब्द काफी छ ‘नयाँ जिम्मेवारी।’
कुरो सफा नै छ, शंकर पोख्रेलले ईश्वरलाई यो व्यङ्ग्य गरेका पक्कै होइनन्।
सामान्य अवस्थामा रक्षा मन्त्रालय ‘सेरेमोनियल मन्त्रालय’ मात्रै हो। तथापि, प्रधानमन्त्रीले कनिकुथी ईश्वर पोखरेललाई ‘पावर’ मा ल्याउन खोजेकै हुन्।
र, फेरि पनि उनले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो उत्तराधिकारी ईश्वरलाई नै बनाउँदैछन्।
नेकपाका कतिपय नेताले ईश्वर पोखरेललाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा अर्थ्याइसकेका छन्। रक्षाको जिम्मेवारी खोसेर पोखरेलको घटुवा भएको कुरामा कुनै ‘दम’ नरहेको उनीहरूको दाबी छ।
उसै त ‘पावरलेस’ हुनु ओली चरित्रमै छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत शक्तिशाली विभाग आफूसँगै राखेका छन्।
ती प्रमुख विभाग ओलीले आफूमातहत राखेपछि प्रतिपक्षी दलले विरोध नगरेका पनि होइनन्।
स्वतन्त्ररूपले काम गर्नुपर्ने निकाय आफूमातहत राखेर प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई चुप लगाउन हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रतिपक्षी दलको तर्क थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओली टसमस भएनन्।
अझै ती विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत नै छन्।
यी त्यस्ता विभाग हुन्, जसलाई जुनसुकै व्याख्या गरेर सजिलै प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी चलाउन सक्छन्।
पार्टीभित्रै उठेका विवादलाई समाधान गर्ने चक्करमा ओलीले ‘पार्टी सञ्चालनको जिम्मा’ लगाएर प्रचण्डलाई आधा शक्ति दिइसकेका छन्।
आफ्नो भागमा परेको ‘सरकार चलाउने’ जिम्मेवारीमा पनि उनी कसरी पो कमजोर हुन चाहन्छन् र?
पूरै मन्त्रिमण्डलमा ओलीका विश्वासपात्रमध्येका एक हुन्, ईश्वर। र, उनैलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा सारेका छन्।
‘पावर ब्यालेन्स’ मा यो एउटा ओली काइदा पनि हो। मन्त्रिपरिषदको ‘संयोजन’ को जिम्मा लगाएर, अब ओलीले ईश्वरलाई थप शक्तिशाली बनाउनेछन्।
र, सके ओली अब पार्टीमा पनि भूमिका देखाउन थाल्नेछन्।
रक्षा आफैंसँग राख्नुको एउटा अन्तर्य, त्यही ‘पावर बार्गेनिङ’ पनि हो।
अर्थात्, प्रचण्डका लागि त्यो ‘ललिपप।’
ओलीले आफ्नो ‘स्टन्ट’ देखाउनुपर्ने ठाउँ अझै बाँकी नै छन्। जस्तो कि, कर्णालीमा जन्मिएको ‘अविश्वास’ को बहाब अझै शान्त भएकै छैन।
लुम्बिनी प्रदेशमा लागेको ‘राजधानी’ को घाउमा अझै मलमपट्टी गर्नै बाँकी छ।
नेकपाका नेताहरू पनि ‘फरक परिस्थिति’ मा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको जिम्मेवारी पनि ‘नयाँ’ भएको दाबी गर्छन्।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रियसभा सदस्य सुमन प्याकुरेल उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बल्ल आफ्नो हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी पाएको दाबी गर्छन्।
‘रक्षा मन्त्रालयमा बसेर उहाँको कुनै कामै थिएन, उहाँजस्तो मानिसले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपथ्र्यो,’ प्याकुरेलले आयोमेलसँग भने, ‘उहाँले बल्ल सही जिम्मेवारी पाउनुभएको हो। क्षमताअनुसार उहाँको बढुवा भएको छ। हामीलाई खुसी लागेको छ।’
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने आफूहरूको सुरुदेखिको माग र चाहना अहिले पूरा भएको उनले बताए।
‘संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छन्, अरू सबै मन्त्री प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन्,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकाले पार्टीको काममा व्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै काम हुन सकिरहेका थिएनन्। मन्त्रालयका कामको अनुगमन गर्न एकजनाको त्यहाँ जरुरी थियो। अहिले पूरा भएको छ।’
उनका अनुसार अब बल्ल ईश्वर पोखरेलले वास्तविक क्षमता देखाउने बेला भएको छ।
‘ईश्वरजी आफ्नो हुनर देखाउने ठाउँमा अहिले पुग्नुभएको छ। सक्नुभएन भने असफल मानिनुहुन्छ,’ उनले भन।
नेकपाका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका विभागमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहतका सबै विभाग वा जिम्मेवारी उहाँले हेर्न पाउनु स्वाभाविक हो।’